Arịrịọ maka ndị na-ahazi Halllọ Nzukọ | Ota Ward Cultural Promotion Association
Iji gbochie mgbasa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ, anyị na-arịọ onye nhazi ka ọ ghọta ma kwado ihe ndị a mgbe ị na-eji ụlọ ọrụ ahụ.
Na mgbakwunye, mgbe ị na-eji ụlọ ọrụ ahụ, biko rụtụ aka na ntuziaka ndị otu ụlọ ọrụ ọ bụla kere ma jụọ maka nghọta gị na imekọ ihe ọnụ na igbochi mgbasa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ.
Ndepụta ntuziaka maka igbochi mgbasa nke ọrịa site na ụlọ ọrụ (inetlọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ)
Nhazi / nzuko
Onye nhazi ahụ ga-enwe nzukọ na akụrụngwa gbasara mbọ iji gbochie mgbasa nke ọrịa n'oge ngwà maka ojiji na akụrụngwa ma ọ bụ n'oge nzukọ ndị gara aga.
N'ime ihe omume ahụ, anyị ga-eme ihe iji gbochie mgbasa nke ọrịa dịka ntuziaka maka ụlọ ọrụ ọ bụla, ma hazie nkewa ọrụ n'etiti onye nhazi na ụlọ ọrụ ahụ.
Biko setịpụ oge maka mmesapụ aka, mmegharị ahụ, na mwepụ.
Biko tinye oge ezumike na oge nbata / ụzọ ọpụpụ nwere oge buru ibu.
Mgbe ị na-eme mmemme na-edoghị n'okpuru nhazi nke "Njikwa Ọrịa na Atụmatụ Nchekwa Ọrịa", biko kwadebe ma bipụta "Nleba anya usoro njikwa ọrịa ọrịa" nke Tokyo Metropolitan Measures Emergency Measures and Infection Prevention Prevention Fund Consultation Center guzobere. mee ya.Maka ajụjụ, biko kpọọ TEL: 03-5388-0567.
Ndepụta njikwa ọrịa
Banyere oke nke oche ndị na-ege ntị (ọnụego nnabata nke ụlọ ọrụ)
Dịka iwu n'ozuzu, oche kwesịrị idobe maka ndị sonyere ka onye nhazi ahụ nwee ike ijikwa ma dozie ọnọdụ oche.
Biko mee usoro zuru oke iji gbochie ibute ọrịa, dị ka ikpuchi nkpuchi, kesaa mkpochapụ nke ịkpọ okwu, na ịkpachara anya nke onye nhazi.
Maka mmemme ndị a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị agadi na ndị nwere ọrịa na-adịghị ala ala ga-aga, enwere nnukwu ihe mbibi ma ọ bụrụ na ibute ọrịa, yabụ biko tụlee ịmekwu ihe.
* Ijikwa oche dị n'ahịrị n'ihu: Biko rụtụ aka na ntuziaka ụlọ ọrụ ma chekwaa ohere zuru oke site n'ihu ogbo.Biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ maka nkọwa.
Ofufe Ọrịa mgbochi jikoro metụtara ndị ọzọ dị ka rụrụ
A na -arịọ onye nhazi na ndị ọzọ metụtara ya ka ha gbaa mbọ igbochi ọrịa ka enwere ike, dịka site na iwepụta oge zuru oke n'etiti ndị na -eme ihe nkiri dịka ụdị okwu si dị.Hụ ntuziaka ụlọ ọrụ maka ozi ndị ọzọ.
Ewezuga ndị na-eme ihe ngosi, biko yikwasị ihe mkpuchi ma sachaa aka gị nke ọma na ebe a.
N’ebe mmadụ ole ekwesighi ịkọwapụta nwere ike imetụ aka ngwa ngwa, dịka ime ụlọ eji ejiji na ebe ichere, wunye ọgwụ na-ehicha aka mgbe niile.
N'ihe banyere iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ụlọ nzukọ, ọ dị mma iri nri ehihie wdg obere oge mgbe ịmechara iri ihe na-agbachi nkịtị ma hụ na ikuku ikuku (ị nweghị ike iri ihe ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ na oche oche).
Họrọ onye na-ejikwa ngwa, akụrụngwa, ngwaọrụ, wdg, ma belata oke nke ndị a na-akọwaghị.
Na mgbakwunye, biko were usoro mgbochi ọrịa zuru oke na omume / omume, nkwadebe / iwepụ, wdg.
Ọ bụrụ n ’ị na-enyo enyo na ọrịa, kọọrọ ya ngwa ngwa were kpọọ ya iche na ọdụ enyemaka mbụ emere.
Ofufe Ọrịa mgbochi jikoro maka sonyere
A na -arịọ ndị sonyere ka ha tụọ okpomọkụ tupu ha abata ebe a na -eme ememme, ma biko buru ụzọ gwa gị nke ọma gbasara ikpe ebe a ga -agwa ha ka ha ghara ịbịa ebe a.N'oge ahụ, biko mee ihe iji hụ na ndị sonyere agaghị ata ahụhụ ọ bụla ma gbochie nnabata nke ndị nwere akara.
Na mgbakwunye na ntule onwe onye nke okpomọkụ n'akụkụ nke ndị sonyere, onye na-ahazi ahụ kwesịrị ịme ihe dịka ịtụle ọnọdụ okpomọkụ mgbe ọ na-abanye ebe ahụ.A na-arịọ onye nhazi ahụ ka ọ kwadebe akụrụngwa na-ahụ ọkụ (onye na-abụghị kọntaktị temometa, thermography, wdg).Ọ bụrụ na ọ siri ike ịkwadebe, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe enwere oke ikpo oku ma okpomoku okuỌ bụrụ na ị nwere otu n'ime mgbaàmà ndị a (*) ma ọ bụ ndị a, biko mee ihe dịka ichere n'ụlọ.
Mgbaàmà dịka ụkwara, dyspnea, ọrịa izugbe, akpịrị akpịrị, imi na-agba agba / mkpọchi imi, uto / isi olfaction, nkwonkwo / akwara mgbu, afọ ọsịsa, ịgba agbọ, wdg.
Mgbe enwere ezigbo njikọ na nnwale PCR dị mma
Mgbochi mbata na ọpụpụ, nleta akụkọ ihe mere eme na obodo / mpaghara chọrọ oge nleba anya mgbe ntinyechara, yana kọntaktị dị nso na onye bi, wdg.
* Nlereanya nke ọkọlọtọ nke “mgbe enwere oke ọkụ karịa okpomoku nkịtị” ... Mgbe enwere okpomoku nke 37.5 ° C ma ọ bụ karịa
Iji zere igwe mmadụ mgbe ị na -abanye ma na -apụ, biko debe ogologo dị anya site na ịbanye na ịpụ na nkwụsịtụ oge, ịchekwa ndị na -eduzi ya, ikenye ndị ọrụ, wdg.
A ga-emechi nri abalị maka oge a.
Biko setịpụ oge ọpụpụ zuru oke tupu oge eruo wee kụziere ụzọ ọpụpụ yana nkwụsị oge maka mpaghara ọ bụla nke ebe mgbakọ ahụ.
Biko zere ichere ma ọ bụ ịga na arụmọrụ ahụ.
Biko gbalịa ịghọta aha na ozi kọntaktị nke mberede nke ndị sonyere site na iji usoro tiketi ahụ.Na mgbakwunye, biko gwaa ndị sonyere na mbụ na enwere ike ịnye ụlọ ọrụ ọha na eze dị ka ebe ahụike ọha na eze dịka ọ dị mkpa, dịka mgbe mmadụ butere ọrịa sitere n'aka ndị sonyere.
Biko jiri ọrụ nkwanye kọntaktị (COCOA) nke Ministry of Health, Labour and Welfare na-arụsi ọrụ ike.
Maka ndị otu chọrọ mkpa, ndị nwere nkwarụ, ndị agadi, wdg, biko tụlee usoro mgbochi n'ọdịnihu.
Biko kpọtakwa anya na mgbochi nke ọrịa tupu na arụmọrụ ahụ, dịka iji ụgbọ njem na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ decentụ.
Mgbochi megide mgbasa nke ọrịa
Onye nhazi ahụ kwesịrị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na enyo mmadụ ọ bụla na ọ na-ebute ọrịa ma kwurịta nzaghachi.
Dị ka usoro iwu n'ozuzu, onye nhazi kwesịrị ịdebanye aha na ozi kọntaktị nke mberede nke ndị mmadụ na-etinye aka na ihe omume ahụ na ndị sonyere, ma debe ndepụta ahụ mepụtara maka oge ụfọdụ (ihe dị ka otu ọnwa).Na mgbakwunye, biko gwa ndị mmadụ sonyere na ihe omume a na ndị sonyere n'ọdịnihu na enwere ike ịnye ụlọ ọrụ ọha na eze dị ka ebe ahụike ọha na eze dịka ọ dị mkpa.
Site na nchedo nke ozi nkeonwe, biko were usoro zuru oke iji chekwaa ndepụta ahụ, wdg, ma tụfuo ya nke ọma mgbe oge ahụ gafere.
Biko kpachara anya mgbe ị na-ejikwa ozi nke ndị bu ọrịa ahụ (gụnyere ndị bi na ya, wdg) nke mere, ebe ọ ga-abụ ozi gbasara onwe gị.
Biko debe akara maka ọkwa na ọkwa ọhaneze mgbe onye ọrịa butere.
Mgbochi oria mmetọ n'ime ụlọ nzukọ
Kpọtụrụ usoro mgbochi ọrịa
Onye nhazi ahụ kwesịrị ịwụnye aka aka na ebe ndị dị mkpa dị ka ọnụ ụzọ na mbata nke ebe a na-enyocha ya mgbe niile ka ụkọ ghara ịkọ.
Onye nhazi a kwesiri ikpochapu ebe a mgbe nile n’otu ebe ndi mmadu na enweta.Onye nhazi ahụ bụ ọrụ maka ịkwadebe ihe ngwọta nke disinfectant.
Iji gbochie ibute ọrịa kọntaktị, biko tụlee ime ka tiketi dị mfe na oge nnabata.
Biko zere ikesa mpempe akwụkwọ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ajụjụ, wdg.Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, jide n'aka na ị na-etinye uwe aka.
Biko zere ịkpọtụrụ n'etiti ndị ahụ metụtara na arụmọrụ ahụ na ndị sonyere, dị ka nleta mgbe emechara ya.
Biko zere inye ma ọ bụ tinye.
Biko kpachie ebe ndị a na-enwerịrị ike ịbanye, ndị metụtara ya, wdg. (Machibido ndị sonyere ịbanye na mpaghara ime ụlọ ahụ, wdg).
Jikoro gbochie ụmụ irighiri ọrịa
Dịka iwu n'ozuzu, ndị sonyere kwesịrị ijide n'aka na ha na-etinye ihe nkpuchi ọbụlagodi n'oge mmemme ahụ.
Biko mee ihe iji gbochie mkpọchi n'oge ezumike na ụzọ mbata / ụzọ ọpụpụ.
Ọ bụrụ na enwere ndị sonyere na-ada oke olu, onye nhazi kwesịrị ị attentiona ntị n'otu n'otu.
Ofufe Ọrịa mgbochi jikoro metụtara ọzọ (karịsịa ngosi ngosi) ⇔ sonyere
Biko zere iduzi nke na-eme ka ohere nke ibute ọrịa (ịrịọ a cheụrị, bulie ndị sonyere na ọkwa ahụ, inye nnukwu mmadụ ise, wdg).
Biko nye ohere zuru oke ma yi mkpuchi ihu mgbe ị na -eduzi ma na -eduzi ndị sonyere.
Na mpempe akwụkwọ ndị na-esonye na ndị sonyere (nnabata ịkpọ oku, tiketi tiketi ụbọchị ahụ), wdg, wụnye nkebi dịka mbadamba acrylic na veinyl veinin na-ekpuchi iji chebe ha pụọ ​​na ndị sonyere.
Preventionzọ mgbochi nje n’etiti ndị sonyere ⇔ sonyere
Ọ bụ iwu na ị ga-eyi ihe nkpuchi na oche ndị na-ege ntị, biko biko jide n'aka na ị na-eyi ya nke ọma site na ikesa na ire ya na ndị na-eyighị uwe na ị wearinga ntị n'otu n'otu.
Biko nye oge zuru oke maka oge nkwụsị na oge mbata / ụzọ ọpụpụ, na-eburu n'uche ikike na ikike nke ebe mgbakọ ahụ, ụzọ mbata / ụzọ ọpụpụ, wdg.
Biko gwa ha na ha ekwesịghị ikwu okwu n’oge ezumike na mgbe ha na-abanye na mgbe ha na-apụ, ma gbaa ha ume ka ha kwụsị mkparịta ụka ihu na ihu ma nọrọ n’ebe dịtụ anya n’ebe a na-anabata ndị ọbịa.
Ọ bụrụ na a na-atụ anya ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị sonyere, biko jiri oge nkwụsị maka ụdị tiketi na mpaghara ọ bụla mgbe ị na-esi n'oche ndị na-ege ntị n'oge ezumike ma ọ bụ mgbe ị na-apụ iji gbochie nkwụsị.
N'ime ụlọ mposi n'oge ezumike, biko gbaa mbọ mee ndokwa nwere oghere zuru oke na -eburu n'uche ọnụ ụlọ ebe a na -anabata ndị ọbịa.
Iri na drinking nu
Biko mechaa nri gị tupu ị nabata ya ma ọ bụrụ na ịbanye dị ka o kwere mee.
N'ihi iji ogologo oge eji eme ihe, ọ ga-ekwe omume iri nri n'ime ụlọ, mana biko mara isi ihe ndị a.
Gbaa mbọ hụ na ikuku ikuku.
Nọdụ ala n'ụdị ihu na ihu.
Hapụ ohere zuru oke n'etiti ndị ọrụ.
Zere ịkọkọrịta osisi na efere n'etiti ndị ọrụ.
Gbochie ikwu okwu n’oge nri.
Yiri ihe mkpuchi mgbe ọ bụla o kwere omume.
Ahịa ire ere, wdg.
Mgbe ọ bara ụba, biko machibido nnabata na nhazi dị ka mkpa.
Biko wụnye disinfectant mgbe ị na-ere ngwaahịa.
Ndị ọrụ na -ere ire ere kwesịrị iyi uwe aka dịka ọ dị mkpa na mgbakwunye mkpuchi.
Mgbe ị na-ere ngwongwo, biko ejikwala ngosipụta nke ngwaahịa ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa ọtụtụ mmadụ ga-emetụ.
Tụlee ịre ntanetị ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ na-enweghị ego iji belata njikwa ego dịka o kwere mee.
Nhicha / mkpofu ahihia
Jide n'aka na ị na-etinye ihe nkpuchi na uwe maka ndị ọrụ na-ehicha ma na-ekpofu ahịhịa.
Mgbe ị rụchara ọrụ ahụ, sachaa ma wụchaa aka gị.
Biko jikwaa mkpofu ekpokọtara nke ọma ka ndị sonyere ya ghara ịbanye na ya.
Biko were ụlọ mkpofu ewepụtara n'ụlọ. (Processingkwụ ụgwọ nhazi kwere omume na ihe owuwu).